अव ओली सरकारले ठगीको समाचार लेख्न नदिन, यस्तो छ कारण ! — Motivatenews.Com
अव ओली सरकारले ठगीको समाचार लेख्न नदिन, यस्तो छ कारण !
Posted on April 15, 2019 by shovaraj baral
पोखरा – पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरी ठगीको समाचार लेखेकै कारण पक्राउ परेका छन । यो घटनाले अव कसैले ठगेको देखेपनि नदेखे जस्तै गरि हिड्नुको विकल्प छैन । किन भने समाचार लेख्यो भने प्रहरीले सिधै साइबर क्राइमको मुद्धा लगाउने छ ।
तान्डव न्युज साप्ताहिक तथा अनलाइनमा बतास अर्गनाइजेसनका सञ्चालक विपेन्द्र बतासले ठूलो रकम ठगी गरेको जाहेरी परेपछि गिरीले त्यसैलाई आधार बनाएर समाचार लेखेका थिए ।
साइबर अपराध मुद्दामा उजुरी परेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको आग्रहमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले गिरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि सोमबारै काठमाडौं पठाएको छ ।
पोखरा–६ का व्यवसायी मनोज श्रेष्ठ र जनकराज पराजुलीले विपेन्द्रले ठगी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी गरेका थिए । गिरीले उनीहरुको जाहेरीलाई उधृत गर्दै श्रेष्ठबाट १ करोड ९८ लाख र पहारीबाट २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बतासलाई ठगी आरोप लागेको समाचार लेखेका थिए ।
समाचार प्रकाशित भएपछि विपेन्द्रले साइबर अपराध मुद्दा हालेका थिए । सोमबार अदालतमार्फत पक्राउ पुर्जी आएपछि कास्की प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौं पठाएको प्रहरीले जनाएको छ । गिरीले पोखरामा क्राइम बिटमा कलम चलाउँदै आएका छन् ।
गिरीलाई पत्रिका तथा अनलाइन दर्ता नगरेको आरोपसमेत लागेको छ । तर, पत्रिका र अनलाइन दुबै दर्ता गरेर वैधानिक र व्यावसायिक हिसाबले निष्ठाको पत्रकारिता गर्दै आएको गिरीको दाबी छ ।
समाचार लेखेकै भरमा अपराध मुद्दा लगाएर पत्रकार पक्राउ परेपछि समाजिक सञ्जालमा यसको विरोध भइरहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘समाचारको विषयलाई लिएर चित्त नबुझेमा नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने र आवश्यक परे कारबाही गर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पत्रकारमाथि साइबर क्राइमको मुद्दा दायर गरी कारबाही गर्ने प्रवृत्तिको महासंघ खेद प्रकट गर्दछ ।’
Posted in मुख्य समाचार, समाचार | Tagged Nepal Police, Oli | Leaveareply